Pochettino oo shaaca ka qaaday waxa ay ka wada hadleen Guardiola intii ay socotay ciyaartii xalay ee Man City iyo Tottenham – Gool FM
Pochettino oo shaaca ka qaaday waxa ay ka wada hadleen Guardiola intii ay socotay ciyaartii xalay ee Man City iyo Tottenham
(England) 18 Agoosto 2019. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino ayaa shaaca ka qaaday waxa ay ka wada hadleen dhigiisa Pep Guardiola daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaartii xalay ka dhacday Etihad Stadium.
Kooxaha Manchester City iyo Tottenham Hotspur ayaa ciyaar xiiso badan ay xalay kuwada dheeleen kulankooda labaad ee horyaalka Premier League xili ciyaareedkan cusub waxay ku soo dhamaatay barbaro 2-2 ah.
Mauricio Pochettino ayaa kulanka kaddib wuxuu shaaca ka qaaday waxa ay ka wada hadleen dhigiisa Pep Guardiola daqiiqadihii ugu dambeeyay ee ciyaarta wuxuunaa yiri:
“Kaddib go’aanka aaladda garsoorka caawisa ee VAR daqiiqadihii ugu dambeeyay ee ciyaarta, waan fiiriyay isagana wuu i soo fiiriyay, kaddibna sheekadu waxay ahayd daqiiqado aan ka wada hadalnay waxyaabo badan oo kala duwan”.
“Waxaan ku iri malaha waa inaan si fiican u sheekeysanaa, laga yaabee inuu igu casuumi doono maqaaxidiisa ku taala magaalada Manchester, waxaana suurtogal ah inaan ka wada hadalno dhowr saacadood waxyaabo badan”.
Waxaa xusid mudan in aaladda garsoorka caawisa ee VAR ay ka diiday kooxda uu hogaamiyo Pep Guardiola ee Manchester City goolkii guusha, kaasoo uu u dhaliyay daqiiqadihii dheeriga ahaa ee ciyaarta lagu kordhiyay xiddiga reer Brazil ee Gabriel Jesus, iyadoo guud ahaan ciyaarta ku soo idlaatay barbaro 2-2 ah.
“Waa inay wax ka qabtaan” – Guardiola oo carro weyn ka muujiyay aaladda garsoorka caawisa ee VAR
Muxuu ku tilmaamay Thibaut Courtois guushii ay ka gaareen kooxda Celta Vigo??